Samsung ကမိတ်ဆက်က Galaxy Note ကို7သင်သည်ကိုယ်မျက်စိနှင့် Unlock နိုင်သလား phablet - သတင်း Rule
Samsung ကမိတ်ဆက်က Galaxy Note ကို7သင်သည်ကိုယ်မျက်စိနှင့် Unlock နိုင်သလား phablet
High-end features တွေအပေါ်ကိုရီးယားစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူကစားနည်း, Phablet ကိုအမျိုးအစားဖန်တီးသူအတွက်နောက်ဆုံးပြောင်းလဲရန်မှကွေးဖန်နှင့်ပရီမီယံပစ္စည်းများ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Samsung ၏ Galaxy Note ကိုထုတ်ဖော်ပြသ7သင်သည်ကိုယ်မျက်စိနှင့်သော့ဖွင့်နိုင် Phablet ကို” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 3rd သြဂုတ်လအပေါ်များအတွက် 2016 07.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Samsung ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် Galaxy Note7Phablet ကိုသင်၏မျက်စိဖတ်နဲ့စက္ကန့်အတွင်းသင့်ရဲ့ဖုန်းသို့သင်ကြကုန်အံ့နိုငျကွောငျးတခုမျက်ဝန်းကင်နာများနှင့်အတူတင်ပို့ဖို့ပထမဦးဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
အတွက် Phablet ကိုတီထွင်ပြီးလျှင် 2011 မူရင်းက Galaxy Note ကိုနှင့်အတူ, Samsung က Note ကိုကျော်သွားခဲ့သည်6သူ့ရဲ့လူကြိုက်များသည် Galaxy S7 လိုင်းနှင့်အတူကိန်းဂဏန်းတန်းတူဖို့မှတ်ချက်လိုင်းဆောင်ခဲ့ခြင်းငှါ.
အဆိုပါဖုန်းအသစ်အတူတူပင် High-end features, အဖွဲ့သောပရီမီယံဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက် က Galaxy S7 Edge လူကြိုက်များ, တစ်ဦးမထိုက်မတန်နှင့်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီရဲ့အခြားစမတ်ဖုန်းများမဆိုထက်ပိုကောင်းပြီးစီးခြင်း.
က Galaxy Note ကိုရဲ့ထိပ်မှာ front-facing ကင်မရာကို selfie join ကို scan မျက်ဝန်းများအတွက်အနီအောက်ရောင်ခြည် transmitter ကိုနှင့်လက်ခံ 7. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သို့သော်၎င်း၏အကြီးမားဆုံးအရောင်းရဆုံးအင်္ဂါရပ်ကို set up နှင့်လည်းကောင်းမျက်စိတစ်တစ်ချက်နှင့်အတူဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ဖို့ပဲစက္ကန့်ကြာမြင့်သည့်အနီအောက်ရောင်ခြည်မျက်ဝန်းကင်နာများ၏ပုံစံအသစ်တစ်ခုကို biometric option ဖြစ်တယ်. ဒါဟာနေဆဲ home button ကိုအောက်မှာလက်ဗွေစကင်နာရှိပါတယ်, သူတို့မျက်ဝန်းကင်နာများအလုပ်လုပ်သူတို့၏မျက်မှန်သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှိစေခြင်းငှါအဖြစ်-wearers glasses သောတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်.
အဆိုပါမှတ်ချက်7လည်းအလားတူသတ်မှတ်ချက်များ features က Galaxy S7 Edge မှ, အဘို့အ 1.5 ၏နက်နဲသောပင်လယ်ကရေစိုခံအောင်က၎င်း၏ IP68 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပါအဝင် 30 မိနစ်, နောက်ကျောအပေါ်တစ်ဦး 12-megapixel ကင်မရာ, 4သိုလှောင်မှု RAM နှင့် 64GB ၏ GB ကို, ပိုပြီးဖြည့်စွက်အဘို့အကာ microSD card slot ပါနှင့်အတူ.
က Galaxy Note ကို7အသစ်ကို USB-C ကို connector ကိုသုံးစွဲဖို့ပထမဦးဆုံးက Samsung စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
က Galaxy Note ကို7ရဲ့ကွေးမျက်နှာပြင်အနားတစ် 5.7in screen ကိုအတူကမြောင်ဖုန်းများတယောက်ပါစေ, သောကကိုင်ဖို့အများကြီးပိုလွယ်သည်ကိုဆိုလိုသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Phablet ကိုတစ်ဦး 5.7in ပြုလုပ်ထားတဲ့ Quad HD ကိုမျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်, ကို USB-C ကို, နှင့်ပေါင်းစည်းရန် S-ကလောင်တံ, ယခုရေစိုခံသည်နှင့်မျက်နှာပြင်စိုစွတ်သောအခါအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်. Samsung ကလည်းမြင့်မားဆုံးကိုတယ်လီဗေးရှင်းကိုဖြတ်ပြီးထွက်ကိုလှိမ့်သောသစ်မြင့်မြင့်မှာ dynamic range ကိုဗီဒီယိုစံအဘို့ကုလားကာကိုအဆင်သင့်လုပ်ထားပြီး, Amazon ရဲ့ချုပ်ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုကနေအကြောင်းအရာကထောက်ခံ, အခြားသူများအကြား.
Samsung ကမှတ်ချက်7ရဲ့ Android အပြောင်းအလဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ 6.0.1 Marshmallow software ကို, မျက်နှာပြင်ကနေတိုက်ရိုက် GIFs သို့ဗီဒီယိုကိုဖွင့်ဖို့စွမ်းရည်အပါအဝင်, နှင့်အမျိုးမျိုးသောအခြားတံ-related tools တွေကို, အဲဒါကိုနိုးထရန်မလိုဘဲအိပ်ပျော်သောအခါစမတ်ဖုန်းရဲ့ screen ပေါ်မှာရေးသားဖို့စွမ်းရည်အပါအဝင်.
S-Pen stylus ရှိပါတယ် 4,096 ဖိအား sensitivity ကိုအဆင့်ဆင့်နှင့်ယခုရေစိုခံသည်, မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအလုပ်လုပ်လျှင်ပင်စိုစွတ်သော – စုံလင်မှသုံးနှစ်က Samsung ကိုယူတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
က Galaxy Note ကို7အစုရှယ်ယာကိုသန့်စင်ပြီးကွေးရှေ့နဲ့ Galaxy S7 Edge ၏နောက်ကျောအနား, သောလက်တော်၌ရှိကပရီမီယံနှင့်အကိုက်ညီခံစားရစေသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါမှတ်ချက်7၏ USB-C ကိုဆိပ်ကမ်းကုမ္ပဏီ၏ဂီယာ VR နားကြပ်တစ်ခုဗားရှင်းသစ်လိုအပ်ပါတယ်, Samsung ကဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့ပိုပြီးအဆင်ပြေဖြစ်အခုမှပြောပါတယ်သော. အသစ်ဂီယာ VR လည်းတစ်ဘက်ခြမ်းမှာဆက်စပ်ပစ္စည်းဆိပ်ကမ်းနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်.
Samsung ကထက်ပိုမိုရှိကြောင်းပြောပါတယ် 1 ၎င်း၏ဂီယာ VR နားကြပ်၏အမျိုးမျိုးသောလူ့ဇာတိ၏အသုံးပြုသူသန်း, အတူ 500,000 အီးယူတွင်ရောင်းချ, သောကရောင်းအားအကောင်းဆုံး VR နားကြပ်များထဲမှစေသည်.
Samsung ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ဂီယာ VR နားကြပ်တိုးမြှင့်နှစ်သိမ့်နှင့််ထိန်းချုပ်မှုအဘို့မျက်စိတွင်းဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Samsung ကမဟာပြိုင်ဘက် Apple ကအတူထိပ်တန်းအဆုံးစမတ်ဖုန်းအာကာသများအတွက်စစ်တိုက်ရာတွင်သော့ခတ်နေသည်, သာမကြာသေးမီက phablet ရောင်းဖို့စတင်ခဲ့ရာ. ပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်စမတ်ဖုန်းများပိုမိုလူကြိုက်များဖြစ်လာကြပါပြီအဖြစ် – ဥရောပအတွက်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာအစိတ်အပိုင်း – ကုမ္ပဏီတွေအဓိကအားဖြင့်မီဒီယာသုံးစွဲမှုအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့စျေးနှုန်းချိုသာကြီးမားသော-ပြစမတ်ဖုန်းများမှမျိုးစုံ functions တွေနှင့်အတူသူတို့၏မြင့်-စျေးနှုန်း phablet ခွဲခြားရန်ရုန်းကန်ခဲ့ကြ.
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတံ functions တွေအပေါ်အာရုံစိုက်မျှော်လင့်ပါလိမ့်မယ်, ပရီမီယံပစ္စည်းများနှင့် Knox လုံခြုံရေးပလက်ဖောင်းင်, အရာနှစ်ခုလုံးလက်ဗွေရာနှင့်မျက်ဝန်းစကင်နာများသုံးပြီးရရှိနိုင်စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲဖို့လုံခြုံမှုအရှိဆုံးနဲ့လွယ်ကူသောတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆို, စျေးနှုန်းချိုသာရွေးချယ်စရာကနေဖောက်သည်ဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်.
က Galaxy Note ကို7ဗြိတိန်တွင်ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်2စက်တင်ဘာလ.
က Galaxy Note ကို7သုံးအရောင်များလာ, အနက်ရောင်, ငွေ / ကိုရွှေအရောင်နှင့်ရွှေနှစ်ဖက်နှင့်အတူတစ်အလင်းသတ္တုအပြာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
30144	3 Android မှာ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, phablet, Samsung က, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ
← ကလေးဆေးခြောက်၏အပြည့်အဝရှိပါတယ်? ထိုဦးနှောက်နှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါငါးအများစုမှာလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်တောင်းဆိုချက်များ Dyson ဟာ 360 မျက်လုံးဖုန်စုပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →